နည်းပညာပိုင်း၊ Web Development ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ Blog တွေ Website တွေရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ စာရင်းပြုစုပြီး ပြန်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
Saturngod - စိတ်ထဲရှိသမျှ
ဒါက ကိုစေတန်ရဲ့ Personal Blog ပါ။ ကိုစေတန်ဆိုတာ ကိုယ်တွေ ငချွတ်ဘဝ၊​ Web ပေါ်မှာ မြန်မာစာတောင် မရိုက်တတ်သေးခင်ကတည်းက အမြဲတမ်း ဝင်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ Mystery Zillion Forum ရဲ့ Founder ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်း ကိုစေတန်ကို လေးစားရင်းစွဲရှိတဲ့အပြင် သူရေးတဲ့ Post တွေကလည်း နည်းပညာဗဟုသုတ တော်တော်လေးရစေတဲ့အတွက် အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို Web Developer ဖြစ်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဦးဆရာရဲ့ Blog ပါ။ တစ်ချိန်က Developer တွေကြားမှာ တော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Myanmar Tutorial ဆိုတဲ့ Website ရဲ့ Founder လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Blog ကနေ ရနိုင်တဲ့ ပညာတွေအများကြီးရှိလို့ Bookmark လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ သင်တန်းဆရာလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးအသားကောင်းပြီး နားလည်လွယ်ပါတယ်။
Personal Blog ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတစ်ခုက နည်းနည်းတော့ Personal ဆန်တယ်။ တချို့ နည်းပညာနဲ့မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါသလို၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလိုမျိုးတွေလည်း ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သိသင့်တဲ့ နည်းပညာအကြောင်းတွေလည်း ဖတ်လို့ရတဲ့အပြင် စာကိုလည်း ဂရုတစိုက် သေချာရေးလေ့ရှိတဲ့အတွက် Bookmark စာရင်းထဲမှာ ထည့်ထားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Blog ပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။
Set Kyar Wa Lar (Universe)YGNCode
YGNCode က ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုတိုလိုပဲ တစ်ယောက်တည်း ရေးတဲ့ Blog မဟုတ်ပါဘူး။ ဒိုင်ခံရေးနေတဲ့သူကတော့ စင်္ကြာပါ။ YGNCode မှာ ထူးခြားတာက ကျွန်တော့်လို ကလေးကုလား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးတဲ့ Post မျိုးမတွေ့ရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီ Blog ကို ဖတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ နည်းပညာကို သိထား၊ လေ့လာထားတဲ့သူ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Poe Ei Phyu – Medium
Read writing from Poe Ei Phyu on Medium. Passionate UX Designer. Every day, Poe Ei Phyu and thousands of other voices read, write, and share important stories on Medium.
ဒီတစ်ခုကတော့ Design နဲ့ပတ်သက်တာတွေ သီးသန့်တင်ပါတယ်။ Medium မှာ တင်ထားတာပါ။ နောက်ပိုင်း Medium က တစ်ရက်စာအတွက် ဖတ်လို့ရတဲ့ Content အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတော့ တခါတလေ ဖတ်မရတာမျိုးတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Blog ပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုတော့ မသိပါဘူး။
တခြား မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ Website တွေရှိပါသေးတယ်။ Medium မှာလည်း မြန်မာလိုရေးထားတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့က အရမ်း Personal ဆန်သလို၊ တချို့ကျတော့လည်း ၆ လလောက်မှ​ တစ်ခါရေးတာမျိုးဆိုတော့ Bookmark စာရင်းထဲကို ထည့်သွင်းမဖော်ပြတော့ပါဘူး။
Laravel သမားတွေအတွက် မဖြစ်မနေ Bookmark လုပ်ထားသင့်တဲ့ Webiste ပါ။ Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ Screencast တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ Quality ကောင်းတယ်ဆိုတာ Resolution ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Content Quality ကို ပြောတာပါ။ အခမဲ့ ပေးတဲ့ Video တွေရှိသလို လစဉ်ကြေးနဲ့ကြည့်ရတဲ့ Video တွေလည်း ရှိပါတယ်။ Jeffery Way ရဲ့ Screencast တွေ အခမဲ့ပေးထားတာဖြစ်လို့ တချို့ Website တွေလို သာမန်ကာလျှံကာ အခမဲ့မဟုတ်ဘဲ အတော်လေးတူတူတန်တန် ပေးထားတယ် ပြောရမှာပါပဲ။
ပြီးတော့ ဒီ Website မှာက Laravel သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။​ Javascrip တို့၊​ PHP တို့အပြင် Development Tools တွေအကြောင်းလည်း အများကြီး တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ Vuejs နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီမှာ အများကြီး လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မဖြစ်မနေ Follow လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
Dev.to ကတော့ Developer သီးသန့် Social Network လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Developer တွေအများကြီး ရှိနေပြီး ဖတ်စရာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆွေးနွေသဘောမျိုး၊ မေးခွန်းသဘောမျိုးလည်း တင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Facebook တို့၊ Twitter တို့ ကြည့်သလို ခနတိုင်းဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
တခြား Social Network တွေကို Mobile App သီးသန့်မရှိပေမယ့် PWA နဲ့ရေးထားတာဖြစ်လို့ Application လိုပဲ Mobile ထဲမှာ သွင်းထားလို့ရပါတယ်။
The Youtube channel for all things Firebase! Learn how to build awesome apps with hands-on tutorials from the Firebase team. Firebase helps you build better ...
လတ်တလော Firebase ကို လေ့လာဖြစ်နေတော့ သူနဲ့ဆိုင်တာတွေ ရှာဖတ်ရင်း Youtube က ဒီ Channel ကို Follow လုပ်ထားဖြစ်တယ်။ Play List တွေလည်း အများကြီးတယ်၊ Firebase ရဲ့ Official Channel ဖြစ်တယ်၊ အခမဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါတွေကြောင့် Bookmark စာရင်းထဲ ထည့်သွင်း ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ လတ်တလော ကျွန်တော်အမြဲလိုလို ဝင်ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ Website တွေပါ။ နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ Website တွေတွေ့ရင်လည်း ဒီမှတ်စုမှာပဲ ထပ်ပြီး Update လာလုပ်ပါမယ်။ တခြားအသုံးဝင်တဲ့ Website တွေရှိလို့ မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအောက်မှဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် Comment ပေးလို့ရပါတယ်။